'शंकै छैन, सोसियल मिडिया यस्तै रहे समाजमा भयावह स्थिति आउँछ आउँछ'
लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका व्यक्ति हुन् प्राे. पी. खरेल । पछिल्लो समय सोसियल मिडियाले समाजमा पु¥याएको प्रभावका बारेमा खरेलसँग नेपालीपत्रका लागि रवि अधिकारीले गरेको कुराकानी ।
विभिन्न घटनाक्रमहरूले समाजमा ‘न्यू मिडिया’को भूमिका एकदमै अनियन्त्रित र कहालीलाग्दो देखाएको छ ? यसलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
यो चाँहि सरकारप्रतिको, राजनैतिक दलहरुप्रतिको आक्रोश पनि एउटा पाटो हो जस्तो लाग्छ । सन्तोष गर्ने ठाउँ भएन । महँगी बढ्यो । रोजगारी छैन । आशा पहिलाको भन्दा झन् बढी छ । त्यो आक्रोश आफूलाई घत लागेको कहीँ एउटा मुद्दा देख्यो भने त्यसले एकदम आक्रोशित बनाउने भयो अनि भड्किने भयो । त्यो भड्किनेमा कोही उत्ताउलो भएर, कोही जानेर कोही नजानेर । त्यसरी सोसियल मिडियामा ठूलो भाँडभैलो आयो । मिडियाको कुरा आउँदा सोसियल मिडियाको कुरा आउँछ । दोस्रो कुरा चाहिँ पत्रकारितालाई सोसियल मिडियाले ठूलो नोक्सानी पु¥याइ रहेको छ । यसमा पत्रकारिता क्षेत्रले कुनै विशेष कदम चालेको मैले देखिनँ । अन्तर्वार्ताहरू पनि भएका छन् तर त्यो भन्दा बढी देखिनँ मैले । सिटिजन पत्रकारिताको कुरा उठेको थियो । कोही पनि पत्रकार हुन सक्दैन । बरु बलियो सूचनाको स्रोत हुनसक्छ । बाल पत्रकारिताको कुरा पनि उठेको थियो । बालक पनि कहीँ पत्रकार हुनसक्छ ? यसमा नैतिक प्रश्न आउन सक्छ । आम मानिसले पत्रकारिता र सोसियल मिडिया बुझेको छैन । सोसियल मिडियामा केही दिक्दार लाग्दा कुराहरू पनि आइरहेका छन् । त्यो दिक्दारिता पनि पत्रकारितामा गएको हुन्छ ।
समाजमा विभिन्न खालका जुन छाडापन छ, जुन व्यवसायिक क्षेत्रमा गर्नै नहुने कुराहरू छन्, त्यसको पनि प्रतिविम्बन भएको छ जस्तो लाग्छ । देशमा भ्रष्टाचार पनि व्याप्त रहेको रिपोर्ट आइनै रहेका छन् । वर्षेनी दशौँ हजार विद्यार्थीहरू ब्याचलर पास हुन्छन् । लगानी पनि त्यति धेरै रहेको छ । तर, जागिर पाउँदैनन् । यी सबैको आक्रोश एकसाथ पोखिन थालेको हो । र ‘इम्टी माइण्ड’ भएकाहरूले पनि सोसियल मिडियामा मनलाग्दी लेखिरहेका छन् । यी अर्काथरी आक्रोश पोख्नेहरू हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा जुन छाडापन, अश्लीलता देखिएको छ, यसले समाजलाई कता लैजादैँछ ?
शंकै छैन । लान्छ नै । तर, बुद्धिजीवी, आमसञ्चारका विलक्षणहरूलाई न यस्ता प्रश्नहरू नै गरिएका छन्, न त उनीहरूबाट जवाफ नै आएको छ । यस्तो प्रश्न उहाँहरुलाई सोधेर उहाँहरूको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, ठाउँ–ठाउँमा विभिन्न मिडियाले लिए भने आफ्नो व्यवसायिक क्षेत्रलाई पनि फाइदा पु¥याउँछ । यिनीहरूको कारण पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम भो भन्दा नि फाइदा नै भयो । समाजमा एकखाले कुसंस्कार आउने भयो भन्ने कुरा पनि चेक हुने भयो नि त । अगुवाले राम्रो बोलिदिएपछि अरु हच्किन्छन् । यहाँ त सुझबुझ भएका मानिसहरूले जथाभावी गरेको छ, गालीमात्र छ । त्योबाट टाढा रहन सहयोग पु¥याउँछ । अहिले त कतिपयले रमाइलोका लागि हेर्ने भयो, रमाइलोको लागि सहभागी हुने भए, कतिलाई हो कि भन्ने झै हुन्छ । अहिले त ‘भिजुअल्ली’ देख्या किन नहुने भन्छ । फेरि प्रविधिको कारण ‘डिस्टोर्सन’ पनि हुने गर्छ । यसमा चाँहि विशेष ध्यान सरकारले दिएन । गैरसरकारी अधिकारीहरूसँग, व्यक्तिहरूसँग कोअर्डिनेशनमा ग¥यो भने होला नत्र सरकारले गर्न लागे नियन्त्रण गर्न लागेको आक्षेप पनि लाग्न सक्छ ।
केही अनलाइन पोर्टल, युट्युबमा प्रसारित ‘कन्टेट’ले समाजमा एकखाले ‘कन्टेट टेरोर’ उत्पन्न गराएको चर्चा चलेको छ । नियन्त्रणको चर्चा चलेपनि कार्यान्वयन हुन किन नसकिरहेको होला ?
मैले पनि न्युज हेर्दा खेरी, कुनै क्षेत्रमा विशेष अध्ययन ग¥यो भने सबै कुरा जानेको हुँदैन, कुनै पनि क्षेत्रमा त्यसैले त आधार भन्नुपर्छ । मैले आधार हेर्दा खेरी अरू ठुला टेलिभिजन सेवाहरू र ठूला अखबारहरू, म्यागेजिनहरू अधिकांशमा सतही समाचार आएको देखे जस्तो लाग्छ । अधिकांश अरूबाट लिने । त्यो पनि देखियो । अरु कसैकोमा देख्ने अनि हालिहाल्ने । पुष्टी पनि नगर्ने । पोर्टलहरूले सुनेको भरमा न्युज लेख्ने, पुष्टी गर्नतिर नलाग्ने । त्यसको बदनामी चाँहि अरू ठूला मूलधारका मिडियाले भोग्नुपर्ने रहेछ । ठूला मिडियाका पनि आफ्ना कमीकमजोरी नभएका होइनन् फेरि । पारिश्रमिक चाहिँ थोरै दिएको हुन्छ अनि चौबिसै घण्टा जिम्मेवारी हो भन्न चाहिँ मिल्दैन । नेपालमा कमी भएकै यही कारण हो । अब यो पोर्टलवालाहरु थोरै लगानीबाट आएका छन् । अनि राम्रै लगानी भएकाहरूमा पनि शंकास्पद लगानी भएको छ । यो अध्ययन गर्नुपर्ने विशेष विषय बनेको छ ।
मिडियाले आम मानिसलाई सजग गराउँछ भन्ने उक्ति परिवर्तन भएर मिडियादेखि सजग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नि ?
यो चाँहि ‘एलिट’मा आयो । आम जनतामा छैन कि जस्तो लाग्छ । आम जनतामा छैन भने यो खतरा हो । मलाई चाहिँ आम जनतामा छैन भन्ने लाग्छ । एलिटहरू यहाँ यस्तो भएको छ भन्ने कुरामा सजग छन् । आफ्नो अनुकूलको छ भने विपक्षी मक्ख पर्छ । आफ्नो विरोधीको बारेमा दियो भनेर । उसलाई विश्वास छैन । तर, अरूले त यो भ्रम पत्याउँछन् । आमजनता कन्फ्युजनमा हुँदा क्षति हुन्छ । सोसियल मिडियाको इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअलमा पनि शो–अफ गर्नका लागि प्रयोग बढी भयो । शो–अफ गर्ने टेण्डेन्सी बढी, बढाइँ–चढाइँ गर्ने टेण्डन्सी बढी, अनि ध्यान त्यतैतिर जान्छ । अरु सीप देखाउने काम कम ध्यान जान्छ । भ्रम मात्र फैलाउने, बढाइँ–चढाइँमात्र गर्ने, सतही कुरा मात्र आउने, अरूको कुरालाई ‘डिस्टोर्ट’ गर्ने, अरूलाई हतोत्साहित गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
मिडियाबाट कन्टेट फिल्टर हुनुपर्ने महत्वपूर्ण चरण नै धरापमा परेका कारण घातक अवस्था सिर्जना भएको त होइन नि ?
अनलाइनका कारण हो कि जस्तो लाग्छ । हो कि भन्नुको अर्थ सबै आधिकारिक कुरै गर्न मिल्दैन । अनलाइनले कन्टेट छिटो दिन्छन् । त्यो डिटेलमा दिदाँ अर्कोले ‘ओभरटेक’ गर्छ कि भन्ने डर । अनलाइनहरूको संख्या धेरै छन् । हाम्रो परिसूचकहरू काठमाडौँलाई नै हेरौँ न । यहाँको लिटरेसी रेट, डिस्ट्रीव्युसन, परचेजिङ पावर । यी जम्मैलाई परिसूचक बनाउँदाखेरी यहाँ जतिको मिडियाका कारण हल्लाखल्ला बढी मच्चाएको अन्त छैन । यहाँ ‘डेन्सिटी’ उच्च छ । बिग्रेका अनलाइन वा अरू सोसियल मिडियामा आएकालाई कपी गर्ने वा ‘इमिटेट’ गर्ने संस्कार बसाल्नु हुँदैन । यो लाइन नै फरक हो । यसकारण लगानी चाँहि राम्रो हुनुपर्छ । सोसियल मिडियामा यस्तो भयो भन्नेले नै मिडिया र सोसियल मिडियालाई मिसाउने काम गरेका पनि छन् । एउटा त्यो लस परेको देखिन्छ ।
लामो समय न्युज कन्टेन्टबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहनु भएको छ ? न्युज ट्रष्टको ट्रेण्ड कस्तो पाउनु भएको छ ?
घुमाइफिराई अमेरिकाकै कुरा आउँछ । त्यहाँ विगत पाँच सात वर्ष यता ग्यालोप पोल जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । त्यसले अध्ययन गर्दा मिडियामा अमेरिकन नागरिकहरू ३० प्रतिशतले पनि विश्वास गर्दैनन् भनेर निश्कर्ष निकालेका छन् । कहाँ हुन्छ भनेर यी मिडियाहरूले पनि प्रतिवाद गरेका छैनन् । भनेपछि त्यति विश्वसनीय भयो नि त । हामी कहाँ भने भेरिफिकेशन, प्रोफेस्नालिजम कम छ । एउटा ज्ञानको कमीले, एउटा सीपको कमीले । मुलतः न्युनतम पारिश्रमिक नै छैन । नेपाल सरकारले तोकेको तलब पनि पियन बराबरको छ । त्यो पनि दिए भयो नि । जब आधिकारीक रुपमा ४० प्रतिशत नै पाएका छैनन् । मेरो गेस त ३० प्रतिशतले नै पाएका छैनन् । पत्रकारिकाताको डेफिनेशन अनुसार त ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म जानुपर्छ । पढ्न पनि त्यसरी नै पढ्ने हो । ज्ञान लिइराख्नु पर्छ । सोधिराख्नुपर्छ । कमसेकम त्यसलाई सुहाउँदो न्युनतम तलब चाँहि दिनुपर्छ । न्युनतम शैक्षिक योग्यता पनि तोक्नपर्छ । कोही कोही चाँहि अनुभवले ज्ञान प्राप्त गर्छन् । लगानी कम भएका कारण केन्द्रीकृत भयो धेरै ।
बहस गर्नुपर्ने कुन मुद्दा हो, कस्ता खाले विषयलाई हाइलाइट गरिन्छ ? नेपाली समाजबारे मिडियाले प्राथमिकता साथ मुख्य मुद्दा उठाउन किन सकिरहेका छैनन् ?
मिडियाले सतही मुद्दाहरू धेरै उठाए । ठूला मिडियाहरूले मेलम्चीको पानीबारे खुब कुरा दिएका छन् । कमसेककम तुलसीपुरमा पुगेको छ कि पानी । विरंगजमा पुगेको छ कि पानी । विराटनगरमा पुगेको छ कि । हेटौँडामा पुगेको छ... । काठमाडौँमा यस्तो छ अन्य ठाउँमा यस्तो छ भनेर विस्तृतमा दियो भने त पाठकहरूको सहभागिता हुन्छ । नेशनल भनेपछि हेटौँडा पनि नेशनल हो नि । यहाँ त दाबी पनि भक्तपुरको सल्लाघारीबाट यता थानकोटदेखि यता जुन जुन छन् यी सबै राष्ट्रिय हुन् । यो त्यसरी होइन । ‘इस्यु’ले दिने कुरा हो । काठमाडौँमा केही भयो कि एकदम ‘डिटेल’मा दिने त्यस्तै मुद्दा अन्त पनि छ कि सोध्ने । बजेट आउँदा काठमाडौँका चार पाँच जना विज्ञलाई मात्र सोध्ने चलन आज पनि छ । अरू छैनन् र ? ठाकुरराम क्याम्पसमा प्रा.डा. छन् । त्यो पनि त्रिविकै हो । मोरङ क्याम्पसमा छन् । केन्द्रका समस्यालाई बढी हाइलाइट गर्ने भए । दोस्रो कुरा भनेको देशभर कुन मुद्दामा के छ त्यसलाई विस्तृत रुपमा हेर्न प¥यो । विगत चार वर्षयता कृषि क्षेत्रका कोर कुराहरू बाहिर आएकै छैन । यहाँ त लेदो जति सोसियल मिडियामा आउने भयो बाँकी शङ्लो जति त्यसै रहने भयो । पत्रकारिता क्षेत्रले हेर्दा खेरी यो मुद्दा सशक्त रुपमा लियो कि लिएन, कुन टार्गेट ग्रुपको इन्ट्रेस्ट कति छ । ‘न्युजवर्दी’ चाँहि हुनुपर्छ । यो जति पनि कुरा छन् यसमा अध्ययन नपुगेकै हो । अर्को प्रमुख कारण पारिश्रमिक नै हो । लिडरसिप लिनुपर्नेले लिडरसिप लिन सकेन । मुद्दा सही आउनै सकेनन् । यो भएन भने विश्वसनीयता घट्छ । सोसियल मिडियाका कारण पनि यसमा ‘इम्प्याक्ट’ प¥यो । व्यवसायिकता बढाउन मिडिया मालिकले लगानी बढाउन प¥यो । अडिट गर्नुपर्छ ।
मिडिया विधेयकको चर्चा चलिरहँदा यतिधेरै रडाको मच्चिनु आवश्यक थियो ? सरकारले बिना तयारी मिडिया विधेयक ल्याउन लागेकै हो त ?
केही सुधार होला । धेरै चाँहि हुँदैन । शेरधन राई सञ्चारमन्त्री हुँदा मिडिया पोलिसी भनेर ल्याउनु भयो । आमसञ्चार नीति भन्नुभयो । यसले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विदेशमा यसले सबैलाई समेट्छ । तर, यहाँ ल्याउन चाहेको नीतिले ‘न्युज कन्टेन्ट’मा मात्र नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यो नीति बनाउँदा अन्तिम मिटिङमा म गएको थिएँ । मैले उक्त मिटिङमा भने सन् २०२८ मा बनाएको आमसञ्चार नीतिकै आधारमा रहेर चलचित्र नीति बनाएको हो । रत्न रेकर्डिङ कम्पनी त्यही नीति अन्तर्गत बनेको हो । सांस्कृतिक कम्पनी त्यही अन्तर्गत बनेको हो । रेडियोको पनि त्यसैले नै ‘गाइड’ ग¥यो । गोरखापत्र र रासस त्यही नीतिअन्तर्गत अगाडि बढे ।
यो काउन्सिलमा मूख्य चाहिँ दण्डनीय भएन । मन्त्रालयको कतिपयमा ज्ञान नै रहेनछ । उनीहरूको तजबिजमा हिँड्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल । आजको प्रेस काउन्सिल पनि ठीक छैन । सहसचिवमुनि राखेका छन् । यसलाई सशक्त बनाउनतिर लागेनन् । हालसम्मको नेतृत्व हेर्ने हो भने पार्टीका सदस्यहरूले नेतृत्व गरेको पाइन्छ । यो मिडिया काउन्सिलको कुरा गर्दा नियत कुरा मुख्य हो । यसले केही कुरा मात्र सपार्न सक्छ । तर, दण्ड लगायत अन्य कुरा त मिल्दै मिल्दैन ।
सोसल मिडियामा यस्तो भाँडभैलो त हुनै दिनुहुन्छ । यसलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ । अहिलेको लङटङ प्रभाव खतरनाक हुने भएकै कारण पनि यसलाई नियन्त्रणको आवश्यकता छ । यसबारे अहिलै बुझ्नु आवश्यक छ ।
एजेन्सी । भारत कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । केहीमा उक्त खोपको साइड इफेक्ट पनि देखिएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार कोरोना खोप लगाएका दुई जनाको ज्यान गएको छ
स्याउको बोटमा कलमी गर्दै किसान
मुस्ताङ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा स्याउको बोटमा कलमी गर्दै किसान । पुस माघको समयमा यहाँका किसानले स्याउको कलमी गर्दछन् ।